धेरै दुध दिएर विश्व रेकर्ड राख्ने भैसीको नाम सरस्वती ! – Hotpati Media
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०९:३० मा प्रकाशित (4 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट
यौटा भैसीले साधारण तया एक सँझमा कति लिटर अथवा किलो दुध दिन्छ? दुई, चार अथवा छ लिटर? तपाई हामीले सोच्ने त्यत्ति नै हो किनकी हामीले त्यो भन्दा धेर दुध दिने भैसी न त देखेका छौँ न त पढेका नै छौँ ।
धेरै अचम्म लाग्ने घटनाहरु भारतमा घटिरहेका हुन्छन् । यो घटना पनि भारतकै हो । भारतको हरियाना भन्ने क्षेत्रमा रहेको उक्त भैसी पनि दुनियाँलाई चकित बनाउने छ । उक्त भैसीले एक साँझमा ३३ किलो दुध दिएर विश्व रेकर्ड राखेको अनौठो समाचार तपाईका लागि टाइम्स अफ इण्डिया डटकमको सहयोगमा ।
३३.१३ किलोग्राम दुध दिएर विश्व रेकर्ड राखेको भारतको हरियाणाको मुर्राह जातको भैंसी ८१ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । पहिलो यो रेकर्ड ३२.०५ किलोग्राम दुध दिएर पाकिस्तानको भैंसीको नाममा रहेको थियो । यो भैंसीको नाम सरस्वती हो र यो घटना केहि महिना अघिको हो।
हिसार जिल्लाको लितानीका किसान सुखबीर सिंह ढांडाले सरस्वतीलाई ४ वर्ष अघि २ लाख रुपैयाँमा किनेका थिए । सरस्वतीलाइ लिएर सुखबीर केही दिन पहिले लुधियानाको जगरांवमा डेरी एण्ड एग्रो एक्सपोमा भाग लिन गएका थिए ।
त्यहाँ सरस्वतीले ३३.१३ किलो दुध दिएर विश्व रेकर्ड कायम गरेको थियो भने ३ लाख २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पनि जितेको थियो ।
भैंसी बेच्नु अघि किसानले एउटा समारोह आयोजना गरेका थिए । उक्त समारोहमा करीब ७ सय किसान उपस्थित भएका थिए ।
लुधियानाका पवित्र सिंहले ८१ लाख रुपैयाँमा सरस्वतीलाइ खरिद गरेका हुन् ।
जापानमा फल्यो ४ सय १० किलोको फर्सी
कोरोनाबाट बच्‍न मन्दिरको घण्टीमा सेन्सर,हात जोडेर उभिँदा घण्टी बज्‍छ